Wal-dhabdee Sudaan: Jaarsummaan MM Abiy maal fiduu danda'a? - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri Muummee Abiy Ahimad garee mormitootaa fi humna waraanaa Sudaan gidduu jaarsummaa taa'uuf guyyaa kaleessaa gara Sudaan kan imalan.
Dursa hogganoota Waraana Sudaan, itti aansuunis bakka bu'oota mormitootaa waliin wal arguunis mari'ataniiru.
Hariiroo diploomasii waggoota dheeraa jabaa ta'e Sudaan waliin kan qabdu Itoophiyaan, biyyattii keessa nagaan akka jiraatu gochuu keessatti qooda guddaa bahuu dandeessi jedhu hayyuun seeraa Dr Awwal Aloo.
Wiixata darbee eegalee kan hammaate wal-dhabdeen mormitootaa fi humna waraanaa Sudaan lubbuu namoota 100 olii galaafateera.
Waldiddaa Itoophiyaa fi Masrii dhimma ijaarsa hidha guddicha laga Abbayyaa irratti Sudaan Itoophiyaa waliin hiriiruun ammoo caalaatti Itoophiyaan Sudaan irraa dantaa akka qabaattu taasisa jedhu.
Humnoota Sudaan lamaan walitti kaleessuuf biyyi humna qabu, biyyi mootummaa gama lamaaninuu amanamuu danda'u qabu Itoophiyaa caalu hin jiru jedhu Dr Awwal.
Biyyoonni akka Masrii, Sa'udii Arabiyaa, Qataar fi Tarkii kallattii adda addaan dursanii harka waan keessa galfataniif amanamummaa gama lamaanii argachuu hin danda'ani jedhu.
Sa'udii, UAE fi Masiriin humna waraanaa biyyattii deeggaru jedhamanii mormitootaan qeeqamu.
Bakka bu'oota mormitootaa waliin
Qataar fi Tarkiin ammoo mormitoota deeggaran jechuun humni waraanaa biyyattii isaan qeeqa. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa rakkoo garee lamaan gidduu jiru furuun cehuumsi biyyattii akka galma gahu gochuuf hiree guddaa akka qabu dubbatu hayyuun kun.
Itoophiyaan dantaan akka biyyaatti Sudaan irraa qabdu biyyaa fi uummata wajjiin waan ta'eef garee tokko waliin dhaabachuu osoo hin taane mootummaan uummataan filatame kan deeggarsa uummataa qabu akka jiraatu tumsuu qabdi jedhan.
Mootumma waraanaa osoo hin taane kan siiviilii uummataan filatame, sagalee uummataa dhagahu akka jiraatu tumsuu qabdis jedhu.
Wantoota gurguddoo raawwatan:
Mormiin Sudaan kan eegalee gatiin daabboo dabaluu isaatiin ture.
Booda pireezidantiin biyyattii Omar al-Bashir aangoo akka gadi dhiisan gaafachuutti cehe.
Humni Waraanaa biyyattii al-Bashir aangoo irraa buuse aangoo qabate.
Mormitootoonni mootummaan siiviilii akka aangootti bahu gaafatanii mormii itti fufan.
Mormitoonni fi humni waraanaa waliigalan.
Qaama ce'umsaa 'Sovereign Council' jedhamu keessatti aangoo qooddachuu irratti wal dhaban.
Loltoonni mormitoota irratti dhukaasuun nama 100 ol ajjeesan.
Gamtaan Afriikaa Sudaan miseensummaa gamtichaa keessaa uggure
Jaarsummaan MM Abiy Ahimad, aanga'oota IGAD akkasumas dura teessuu gamtaa Afriikaa kan taate Masirii waliin ta'uun egalan kun yeroo gabaabaa keessatti bu'aa akkanaa buusa jechuun hin danda'amu jedhu Dr Awwal.
Gareelee gama lamaaninuu jiran humnoota adda addaatu duubaan jira, humnoota kana bira darbanii waliigaltee kana saffisaan raawwachuun rakkisaa ta'uu akka malu dubbatu.
Haa ta'u malee adeemsi isaa amma eegaluun gareen lachuu walitti kalaayee waliin akka dubbatu hiree uuma jedhu.
Rakkoon biyyattii guyyoota darban keessa daran hammaachaa dhufe kan jedhan Dr Awwal, yeroo kanatti qaamoleen lamaan walitti kalaayanii marii akka eegalan gochuun mataan isaa bu'aa guddaa buusa jedhu.
Sudaan Kibbaa: Hoggantooti wal waraanaa turan Finfinneetti wal arguufi
Soomni ramadaanaa madinummaa qaamaa ni hir’isamoo ni gabbisa?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 2 Caamsaa 2020
'Mootummaa qeequun kan beekamu Aleks Naavaalni du'aa fi jireenya gidduu jira'